Nakuba kunezizathu ezanele zokukhetha i-WordPress ukubhala incwadi, sizogxila kwisakhi esisodwa esisenza i-CMS ekhethekile – inqwaba you-plugin eyenza ukwakha isayithi kube lula futhi kumnandi.
8 I-15. I-Clef tweefaktor Ukuqinisekisa
10 I-19. Ek-Meta-skuifbalk
I-Google XML Sitemaps i-plug-in ebalulekile you-SEO soek-web crawlers ukuthi baqonde isayithi lakho bese babhala amakhasi awo.
Ek-Yoast SEO bied ‘n plug-in aan en probeer dit op die bladsy met nokwenza kahle. Kuyasiza ukuthola izinkinga, ukhiqize ama-sitemaps, futhi unikeze izincomo ezingathuthukisa izikhundla zesayithi lakho.
U-Akismet het die i-plugin engasiza ekuvimbeleni ugaxekile ontydig. Ihlola ngokuzenzekelayo futhi ihlunga yonke imibono e-shady yokubuyekezwa komhlahlandlela.
Ons-plugin is ‘n webwerf-oorspronklike bladsybouer wat ‘n isikhombimsebenzisi sokudonsa nokudonsa kumhleli wekhasi bou. Ungakha ikhasi elisha kusuka emhlabathini phezulu noma sebenzisa isakhiwo esakhiwe ngaphambilini ukugcina isikhathi.
I-15. I-Clef tweefaktor Ukuqinisekisa
Vakashela ku-intanethi: I-Black Studio TinyMCE-widget
Nge-Black Studio TinyMCE Widget, ‘n unieke weergawe van ‘n kalebas, ‘n geringe kant, okunamathiselwe kumidiya, nezinye izakhi zokuqukethwe kuma-sidebars.
Amafomu we-Ninja ufaka umhleli wefomu lokudonsa uphonsa ekufakweni kwakho kwe-WordPress. Ek-plug-in vriendelike vriendelike engakwazi ukukuqondisa zonke izinyathelo zendlela.
Nge-Breadcrumb NavXT, unganikeza izivakashi zakho izixhumanisi zokuhamba ukuze zizisize ukuthi ziphi. Uma ifakiwe, udinga ukunamathisela ikhodi elula ‘div’ lapho ufuna khona "umzila" ons-broodkrummel ukuvela.
I-WP Mail SMTP is ‘n gebruiksvriendelike gebruik van i-SMTP, en u sal dit ook nodig hê om dit te aanvaar. Gebruik u i-plug-in, iya kuzilungiselelo> I-imeyili kusuka kudeshibhodi yakho. Ungathumela futhi i-imeyili yokuhlola ukuze uhlole uma ukucushwa kwakho kusebenza.
Vakashela ku-intanethi: I-Widget ja
Ek-plug-in Kalender Kalender ivumela ukuthi udale amakhasi asebenzisana nemicimbi efana nokukhushulwa, amaqembu, nama-seminaar. Vele usebenzise isikhombikubona esibonakalayo ukuze ugcwalise imininingwane bese ushicilela umcimbi wakho.
Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress inezindima eziyisihlanu zomsebenzisi – umqondisi, umhleli, umbhali, umnikelo, nombhalisi. Rol van gebruikers-gebruiker ikuvumela ukuba ushintshe izimvume zohlu lomsebenzisi ngamunye. Ukhululekile futhi ukudala izindima ezintsha ngezimvume eziyingqayizivele.
Nge-plugin-WordPress, amptuba angapheli op uhlobo lwamawebhusayithi ongawadala. Qinisekisa ukuthi uhlela phambili ukuze izingxenye zesayithi lakho zifake isipiliyoni esisodwa, esihlangene. Ungabhekisela kuwo lokhu okuthunyelwe kwamapulagi angaphezulu angasiza ukwandisa ukuguqulwa.